Concept futhi izinhlobo izindleko zokukhiqiza bayazazi cishe wonke umuntu namuhla. Bayisibonelo izindleko okuyinto kunoma yiliphi icala adingekayo ukusebenza evamile inhlangano, ukuqaliswa ukumaketha kanye ukukhiqizwa imisebenzi yayo. Nge izindleko ephathelene nomsebenzi kwezomnotho, ebhekene ngokuqinile ngamunye, ngaphandle kokukhetha, kodwa ngesikhathi esifanayo babe zahlukahlukene kakhulu. Izinhlobo izindleko ungaba ngezigaba ezilandelayo:
Ukuze indima yakhe kumiswa izindleko izinsizakalo, imisebenzi kanye nemikhiqizo ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana izindleko eziyisisekelo futhi phezulu. Izindleko main ngqo ezibangelwa ukukhiqizwa futhi yokukhiqiza inqubo. izindleko Okuza yenzelwa ukudala izimo ezidingekile umsebenzi evamile yebhizinisi, okuyinto lihlotshaniswa womshini imikhiqizo.
Ngu ezingeni homogeneity we nokusaphaza elula eziyinkimbinkimbi. izindleko Ordinary zenziwa kuye lunye lenkampani. izindleko Complex - inhlanganisela izindleko zayo yonke iminyango neminyango zokukhiqiza kwenhlangano.
Kuye nesikhathi nesenzakalo zalezi zinhlobo izindleko waphawula njengoba okwamanje nokwesikhathi esizayo. izindleko yamanje - labo ezenzeka ngqo womshini kwezimpahla. Ziyakwazi isisekelo somsebenzi okwengeziwe yokuhlela. Ikusasa - kubiza inhlangano, ke kuyodingeka ukuba bazilethele esikhathini esizayo.
Ukuze kahle ukunquma ukuhlela indlela okukhipha, izindleko, ukwabiwa yezici zokukhiqiza kanye nezinsiza, kubalulekile ukuba acabangele nanoma yimaphi amathuba, ikakhulukazi labo abonakala efaneleka kakhulu ngokuya nenzuzo kanye inzuzo. Kuyadingeka ukuba acabangele ikhono ehlukile noma ukusetshenziswa ukonga ngaphezulu kwezinsiza. Kungasiza izinhlangano ukwehlisa izindleko zokukhiqiza ekuhleleni imisebenti yezezimali.
Ezingeni lokuhlela kwinhlangano yokugubha lezi izinhlobo izindleko:
- Accounting - ekutholeni isikhathi samanje zonke izindleko for yokufuna ezimpahleni ezingasuki phansi, izinto zokusetshenziswa, yokukhiqiza izinto, eyisikhulu phakathi lapho kuphuma zabasebenzi.
- Kwangaphakathi - inani iholo ukuthi singawathola uma sizila nge nezindleko okunengqondo ngokwengeziwe futhi ukonga yezici zokukhiqiza ezibonakalayo.
- Economic. Babonisa inani ezimali kanye nezindleko zangaphakathi.
- Buyisela - izindleko kwenhlangano, okuyinto ngokuhamba kwesikhathi ubuye. Umphumela ungase ube ukungahambisani isibonelo, izindleko zokukhiqiza, okuyinto emva kokusebenza liyombozwa ngokugcwele.
- Umbe - non-yansukuzonke izindleko, ezifana ukudalwa kanye nokubhaliswa inhlangano, umshwalense yayo, njll Kufanele ukuthi izinhlobo ze-non-ukubuya izindleko -. The eyodwa kuphela ukuthi ungayitholi enye.
Esimweni lapho ngesisekelo ukuhlaziywa izindleko ibhizinisi kuyinto ivolumu zokukhiqiza, ezimbili zama-izindleko ingachazwa:
- njalo. Ziyakwazi neze sincike ukukhiqizwa kwezimpahla namasevisi. Lezi zihlanganisa izindleko njalo ngenyanga, ezifana ukukhokhelwa ukuze iqashwe, ugesi kanye negesi, iholo abasebenzi.
- eliguqukayo. Lolu hlobo lwe-mali isetshenziswa encike ngqo kwi inani imikhiqizo.
Ndawonye, fixed kanye nezinhlobo elibanzi izindleko ziboniswa okwedlulele, okungukuthi nabo zihlanganisa amortization.
izindleko Isilinganiso zokukhiqiza ngenxa nezindleko iyunithi imikhiqizo ekhiqizwa ngamunye. izindleko Asemphethweni kuchazwa ngokuthi izindleko kweyunithi ezingeziwe okukhipha kukhiqizwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwazi umqondo futhi izinhlobo izindleko kubaluleke kakhulu, ngoba Lokhu kuzosiza ukuba ugweme ekuthengeni izinto ezingadingekile.
Kuyini fund uthango? Umthelela emnothweni emhlabeni
Ukuqothuka izinhlangano ngokomthetho njengenhlangano nesilinganiso esifanele
Inani abasebenzi - Iyini? Isilinganiso kanye ekubalweni isibalo sabasebenzi
Medicine "Tonsilotren": ukubuyekezwa kanye Isicelo
Ngokuqhubekayo iqala kabusha uma uvula kukhompyutha yini okufanele uyenze?